WordPress: Njodzi Kudzorera | Martech Zone
WordPress: Njodzi Kudzorera
China, April 5, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chekupedzisira mazuva mashoma Ndanga ndichishanda zvine hukasha kuti ndiwane shamwari yangu yakanaka Pat Coyle's blog back. (Zororo rangu riri kuramba richiwedzera kunakidza - nhasi kuchinaya chando zvishoma… muna Kubvumbi!
Ndiri kuda kugovana zvakaitika uye nekukurukura matanho ekudzivirira andakatora pamwe nekuti akagadziriswa sei.
A DNS server yakaenda pane fritz. A DNS sevha inodudzira inopinda traffic kune zita rezita uye inoidzosera kune yakakodzera server. Neichi chichiitika, chakanyatso kudimbura nzira mbiri dzekutaurirana - iro domain zita kune saiti uye saiti kune dhatabhesi (dhatabhesi yake parizvino iri munzvimbo yakagovaniswa).
Ndakaomesa zvinhu nekukasira kufambisa bhurogu yake kune imwe server, ndisingazive kuti paive nenyaya yeDNS. Izvi zvinowedzera imwe nhanho yekuoma kunzwisisa. Password muWordPress (uye mamwe akawanda mashandisirwo e database) akasarudzika akavharidzirwa neseva yavari. Kana iwe ukaendesa saiti kune imwe sevha, iwe uchangobva kuremadza kugona kwako kudhirowa iyo password. Nekutenda, WordPress (chimwe chinhu chakanakisa) ine password yekudzoreredza system uko kwaunogona kuseta password yako kuburikidza neiyo link mune email.
Hechino chiito chekukurumidza chandakatora:
Izvi zvisati zvaitika, ndinofanira kutaura kuti ndine yakanakisa webhu inomiririra kambani inoita yakakwana backups. Ini handina kumbobvira ndine nyaya yekuti ivo havana kukwanisa kugadzirisa kuburikidza nema backups. Ini ndanzwa maroto kubva kune vamwe vanhu pamablog avo uye masosi ari kurasika zvachose. Handikwanise kufungidzira kuti zvakaita sei kupfuura izvo. (Nyorera kune yangu RSS feed uye iwe unogona kuwana koponi yegore remahara kuenda nemuenzi wangu).
Ini ndakakwanisa kupinda muWebhu Server ne ftp uye dzosa zvese zviri saiti uye iyo database. Chimwe chiitiko cheyangu yekubatira package ndeyekuti ini ndinogona kuwana iyo yese VDS kupfuura iyo chaiyo webhusaiti pachayo. MySQL inochengeta dhatabhesi mufaira dhairekitori (/ var / lib / mysql /). Ini ndakakwanisa kurodha pasi database chete nekuteedzera dhairekitori renzvimbo. Taura nezve backup huru! Hapana kuendesa kunze, hapana kutumira kunze, hapana hukuru hwemafaira ekugadzirisa ... chete FTP.
Zvino zvandanga ndiine saiti uye dhatabhesi yemuno, ndakafema kugomera. Dai ndakangomira pano uye ndave nemoyo murefu, iyo nyaya yeDNS ingadai yakazvishandira uye Pat angadai akadzoka nekukurumidza. Ini ndakavimbisa kuti iyo Domain Name yakanga ichiri kunongedzera kune akakodzera Zita Seva eangu saiti anoshandisa Whois.net. Kana iwe ukatarisa domeini yako ipapo, iwo mazita maseva ari pazasi chaipo pemushumo.
Izvi zvakanditungamira kuti nditende kuti saiti ingangodaro yakabiwa. Iro zita revhavha raive rakarurama asi iro peji raiuya raive rakaipisisa peji raitaridzika kunge spam. Ini ndakashandisa iyo Rarama Misoro inowedzera-on kuFirefox kuti ndione kuti chokwadi ndakanga ndisiri kuendeswazve - iko chaiko kubira kunoonekwa nevanhu vazhinji. Iyo saiti yanga isiri kuendeswa zvakare. Ndingadai ndakamboita imwezve yekugadzirisa matambudziko. zvisinei, ini ndakapinda tikiti rekutsigira nemuenzi wangu kuti nyanzvi dzavo dzitange kuferefeta.
Kudzorera saiti yako kune imwe account kana mutariri:
Ini ndakanga ndisati ndavandudza Pat kune yazvino vhezheni yeWordPress 2.1, PHP, uye MySQL zvakadaro, saka ndakafunga kuti pakanga pasina nguva irinani kupfuura ino! Ini ndakadzima account yake yekare ndokutanga account nyowani. Ini ndakanyorazve email yake alias ruzivo uye ndikatakura database, WordPress 2.1 uye zvemukati zvaPat:
wp-zvemukati kurodha dhairekitori - ndipo panogara mese mifananidzo yako yakaiswa.
wp-zvemukati plugins dhairekitori - ese ako plugins (ita izvi zvekupedzisira kunyangwe sezvo iwe ungave uine vhezheni nyaya.
wp-zvemukati zvinyorwa dhairekitori - yako theme.
Ndinovimba mune ramangwana kuburitswa kweWordPress kuti aya matatu madhairekitori ari midzi madhairekitori kwete madiki madhairekitori. Izvo zvinoita kuti kusimudzira kuve nyore! Panguva ino, muenzi wangu anga awana iyo DNS nyaya uye akanyatso kuendesa saiti. Wee! Izvozvi peji raPat raive richidzoka kumusoro neIzwi reKusimudzira meseji. Ini ndakadzvanya nepakati kuti ndiwedzere dhatabhesi uye iye aive akatsigira… ndoda.
Rangarira nyaya yekunyorera yandataura nezvayo? Hongu, Pat haana kukwanisa kupinda nekuda kwayo. Yake password haina kuzobvisa kukosha mu database nenzira kwayo saka ini ndaive neimwe gadziriso yekuita. Ini panyama ndakapinda mudhatabhesi uye ndikachinja Pat's mhinduro email kero mutafura yemushandisi kune yangu email kero. Ini ndakazoshandisa iyo "Yakarasika password yangu" chimiro kuti nditumire email pachangu chinongedzo kuti ndigadzirise zvakare password. Mushure mekumisazve password, ini ndakapinda mukati ndikashandura kero yeemail yaPat kumashure.
Uye zvino Pat adzoka kumusoro! Hindsight ndeye makumi maviri / makumi maviri… dai ndakangomirira pamushambadzi wangu, nyaya yacho ingadai yakagadziriswa. Ini ndakanyatso kuomesa nyaya. Nekudaro, Pat izvozvi zvakagadziridzwa uye zvichimhanya akanakisa vhezheni yezvose. Ndine urombo kuti anga ari pasi kwenguva refu, zvakadaro. Hazvitore nguva yakareba kuti tidzokere kumashure kubva panguva yekuzorora, asi zvinokanganisa zvakashata! Ndine urombo, Pat!
Ita shuwa kuti iwe une wemuenzi ane makuru backups.
Chengetedza yako saiti uye dhatabhesi uye uzvichengete munzvimbo yakachengeteka.
Kana iwe uine mugamuchiri akanaka, vimba navo kuti vawane uye vagadzirise nyaya yacho.
Kana iwe uchida, enda kune itsva inomiririra kana account uye unzwisise maitiro ekudzoreredza saiti, dhatabhesi, uye kudzoreredza password yako.
Zvimwe zvekuwedzera info
Mazuva ano kudiwa kwekukurumidza internet kubatanidza kwawedzera manifolds. Zvirokwazvo, munyika ino inofamba yeinternet, satellite foni yakaratidza kukosha kwayo. Kana zvasvika kune isina waya internet, vanhu vachiri panjodzi uye vanobvunza internet isina waya sei yakakosheswa kwazvo kwavari. Kunyanya kune vemawebhusaiti kukosha kwe isina waya DSL hapasisina mubvunzo. Kunyanya aya mawebmasters vanosarudza webhu dhizaini studio yekugadzira uye wozoda iyi yekumhanyisa kubatana kubatanidza kuiisa. Sechinhanho chinotevera kubatana kwekukurumidza kunodiwa zvakare mukuita kwe search engine marketing. Munhu ane Certification yeMicrosoft inogona kubata nyore nyore matambudziko ese mukubatana kweaya mabatanidzwa.
Tags: wordpress njodzi kupora
Kiss Theory Akanaka Bye: Iwo Mashanu Anokanganisa Maitiro eMakambani
Border Rarama pa01: Border vs. Amazon Email Kushambadzira